परीक्षा खुल्यो, अब यसरी गर्नुहोस् लोकसेवा तयारी « AayoMail
परीक्षा खुल्यो, अब यसरी गर्नुहोस् लोकसेवा तयारी
कोरोना महामारीले नेपाल होइन सारा विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ।
यो चपेटामा लोकसेवा, शिक्षक सेवालगायत विभिन्न क्षेत्रको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू मारमा परे।
कोरोनाले नेपाललाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्दै गएपछि सरकारले मुलुकमा लकडाउन जारी गर्‌यो।
त्योसँगै मुलुकले आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने जोखिम बढेसँगै सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द गर्‌यो। यो निर्णय थियो २०७७ वैशाख १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको।
बैशाख १४ मा सरकारले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै विभिन्न सरकारी सेवामा तयारी गरिरहेकाहरू अलमलमा परे।
सरकारको उक्त निर्णयले तीनै तहका सरकारका निजामतीका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र संगठित संस्थाको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकियो। अब कहिले विज्ञापन खुल्न भन्ने पिरलोमा थुप्रै विद्यार्थीहरू थिए।
तर, सरकारको २०७७ असोज १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकसेवाका नियमित विज्ञापन सम्बन्धिका सम्पूर्ण पदपूर्तिका विज्ञापन खुला गर्ने निर्णय गर्‌यो।
योसँगै विद्यार्थीमा पुन: हौसला थपिएको छ।
दसैं-दिपावलीपछि सरकारी सेवाका लागि विज्ञापन आह्वान हुने आसमा फेरि थुप्रै विद्यार्थी तयारीमा जुटेका छन्।
तर, तयारी कसरी गर्ने?
शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्दै गरेकी चित्रा जोशीले सरकारको उक्त निर्णयसँगै आफूले अनलाइन कक्षा लिइरहेको बताइन्।
'म प्रत्येक दिन विहान ६ बजे चैतन्य एकेडेमीले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन्छु', उनले भनिन्, 'कक्षा मेरो लागि निकै प्रभावकारी भइरहेको छ। कोरोना कहरले घरभित्र थुनिएर मनमा अनेक कुरा खेलिरहेको समयमा क्लास लिँदा नयाँ उर्जा थपिएको महशुस भएको छ।'
लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने अलमल छ?
सरकारले लकडाउन पछि निषेधाज्ञा जारी गर्‌यो।
अहिले सबै क्षेत्र लगभग खुकुलो भएको छ।
ठूला पार्टी प्यालेस, विद्यालय, टिसन इन्स्टिच्युटहरू अझै खुल्न सकेका छैनन्।
यस्तो बेला धेरै विद्यार्थीहरू लोकसेवालगायत सरकारी सेवाको तयारी गकसरी गर्ने अन्योलमा छन्।
अहिले धेरै इन्टिच्युटहरूले जुमलगायतका विभिन्न वैकल्पिक विधि अपनाएर कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यदि त्यस्तो अन्यौल छ भने अब घरमै बसेर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर तयारी गर्न सकिने छ।
तयारीको हामी बन्छौं सारथी : गणेश जोशी
चैतन्य एकाडेमिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश जोशीले आफूहरूले जेठ महिना (पाँच महिना) पहिले देखि नै अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको बताए।
'हामीले प्रत्येक दिन थोरै शुल्कमा सशुल्क कक्षा र प्रत्येक शनिबार निशुल्क कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं। यस्तो गर्नुको उद्देश्य भनको विद्यार्थीहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग पुगोस भन्ने हो। असहज परिस्थितिमा सेवाभावले काम गर्नु सबै नागरिकको दायित्व पनि हो', उनले भने, 'हामीले थोरै भए पनि आफ्नो दायित्वलाई पुरा गर्न खोजि रहेका छौं।'
उनले यसबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मात्र नभएर कोरोना त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको बताए। विद्यार्थी तयारीमा जुट्दा उनीहरूको मनमा अनावश्यक कुरा खेल्न नपाउने भएकाले पनि क्लासहरू प्रभावकारी भइरहेको उनले बताए। जो
शीले निशुल्क १९औं शृङखला चलाइसकेको बताए। उनले सुरुआति दिनमा विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन ल्याउन गाह्रो भए पनि अहिले सयौं विद्यार्थी अनलाइन क्लासमा सहभागी भइरहेको बताए।
'पहिले हाम्रो कक्षामा प्रतक्ष पढ्ने बानी थियो। अनलाइनबाट पढ्दा कसरी पढाइहोला भनेर थुप्रैमा अन्यौल थियो। अहिले कुमारप्रसाद तिमल्सिना सरले निरन्तर अमेरिकाबाट पढारहनु भएको छ। यसले सबैलाई फाइँदा पुगेको छ। र, हामी विस्तारै अनलाइन फ्रेन्डली हुँदै गएका छौं।'
उनले अहिले १५ दिनमा कम्प्लिट हुने कोर्ष एक महिना लगाएर लामो समय दिँदै विद्यार्थी मैत्री तरिकाले पढाइरहेको बताए। देशको जुनसुकै भागबाट पनि कक्षामा सहभागी हुन सक्ने भएकाले विद्यार्थीले यसबाट ठूलो फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ छ। यसले काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता र खर्च बचेको जोशीको भनाइ छ।
कसरी समय बिताउने भनेर खाली बसिरहेका विद्यार्थीहरू अहिले तयारीमा तल्लिन भइरहेको जोशीले बताए।
'हामी व्यापार गर्दै गरौला। यो व्यापार गर्ने बेला होइन। सबैले जोगिने र आफूलाई व्यस्त राख्ने बेला हो। देशको सक्षम जनशक्तिलाई हामीले अध्ययनमा इन्भल्व गरिराख्यौ भने उनीहरू डिप्रेसनमा जानबाट जोगिने लगायत थुप्रै फाइदा हुन्छ। यसैले हामीले अहिले यसरी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका हौं', उनले भने।
‘सफलता तपाइको सहकार्य चैतन्यको’ नारा दिएर अगाडि बढीरहेको उनले बताए। उनले प्रत्येक शनिबारलाई सिकाइको बारको रुपमा लिएर निशुल्क कक्षा सञ्चालन गरिरहेको जोशीले जानकारी दिए।
अहिले चैतन्य जस्तै अन्य इन्टिच्युटहरूले पनि यसैगरी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए। लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई खाली नबसेर कक्षा लिन उनी सुझाव दिन्छन्।